Ahoana no ampiasan'ny Interpol ny haino aman-jery sosialy | Ny andraikitry ny fanamarihana Interpol & Interpol
Ahoana ny fampiasan'ny Interpol ny media sosialy
Andraikitry ny INTERPOL
Nanjary lafiny iray lehibe amin'ny fiainantsika ny media sosialy. Ny ankamaroan'ny mponina manerantany dia mampiasa sehatra media sosialy farafaharatsiny. Raha ny marina, fanadihadiana iray vao haingana no nanambara fa eo ho eo Olona 3.6 miliara eran'izao tontolo izao dia ampiasao ny media sosialy. Vokatr'izany, ny isan'ny mpampiasa marobe dia nitarika orinasam-pandraisana haino aman-jery sosialy hanatanterahana ny sasany amin'ny andraikiny. Anisan'ireny fikambanana ireny ny International Criminal Police Organization (INTERPOL).
Alohan'ny handinihantsika ny fomba fampiasan'ny INTERPOL, fikambanana polisy lehibe indrindra manerantany amin'ny media sosialy, andao aloha hojerentsika hoe inona ny dikan'ny INTERPOL.
The Fikambanan'ny polisy misahana ny heloka bevava iraisam-pirenena (INTERPOL) dia fikambanana iraisam-pirenena misy firenena mikambana 194. Any Lyon, Singapore no misy ny foibeny. Ny fikambanana dia miasa miaraka amin'ny herin'ny polisy any amin'ireo firenena mpikambana ao aminy mba hampihenana ny asan-dahalo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Afaka manatanteraka izany izy ireo amin'ny alàlan'ny famelana ny herin'ny polisy ao amin'ny firenena mpikambana hizara sy hiditra amin'ny angon-drakitra momba ny heloka bevava sy ny mpanao heloka bevava. INTERPOL dia namorona rafitra iray ahafahan'ny departemanta polisy any amin'ny firenena mpikambana mizara izany angona izany.
Isaky ny firenena mpikambana, INTERPOL dia manana Birao foibe nasionaly (NCB). Ity birao ity dia toerana ifandraisan'ny Sekretariat jeneralin'ny fikambanana sy ny NCB hafa. Ary farany, ny INTERPOL dia manana filan-kevi-pitantanana faratampony. Ity rafitra ity dia ny General Assembly izay misy solontena avy amin'ny firenena samy hafa mpikambana. Malaza amin'ny fanadihadiana sy ny tambajotram-pifandraisana manerana ny sisintany ary amin'ny ankamaroan'ny tranga heloka bevava lehibe ny Interpol. Mampiasa fitaovana isan-karazany ny hery ara-dalàna amin'ny famotopotorana azy.
INTERPOL dia mitana andraikitra lehibe amin'ny maha fikambanana iraisam-pirenena azy. Ireo andraikitra ireo dia miasa amin'ny ankapobeny hanamafisana ny firafitry ny firenena mpikambana. Anisan'izany:
Fifanakalozana angona: Ny INTERPOL dia manome làlana ho an'ireo NCB ao amin'ny firenena samihafa hizarana angona. Ny NCB an'ny firenena mpikambana tsirairay dia mifampiresaka amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana azo antoka amin'ireo NCB hafa. Izany dia miantoka ny fiarahan'ny fihetsik'izy ireo sy ny asany.
Ohatra, raha misy firenena mametraka a jereo fa tadiavina ny olona iray, ny firenena hafa dia hitady an'io olona io. Azo atao izany noho ny fifanakalozana data.
Amin'izao fotoana izao dia eo ho eo ny INTERPOL Firaketana nizara 90 tapitrisa ao amin'ny tahiry.
Manampy ny mpitandro ny filaminana any amin'ny firenena mpikambana: Ny Interpol dia ny famoronana làlana ahafahan'ny mpitandro ny filaminana any amin'ny firenena maromaro mifanampy. Mety ho eo amin'ny sehatry ny fiofanana, forensika, tahiry ary tahiry tahaka izany. Izany dia miantoka fa ny polisy any amin'ny firenena samy hafa dia afaka manatanteraka tsara ny asany.
Mitandro ny filaminana eran-tany: Ny tanjona voalohany amin'ny INTERPOL dia ny hitazomana ny filaminana manerantany amin'ny fampiraisana ny vondrona iraisam-pirenena. Izy io indray dia hanamafy ny fampiharana ny lalàna iraisam-pirenena. Manome azy ireo fahaiza-manao hahatratra ny tanjon'izy ireo, ao anatin'izany ny fanenanana ny fanondranana zava-mahadomelina, ny heloka bevava amin'ny cyber, ny famotsiam-bola, ny fampihorohoroana ary ny tiana.
Amin'ny fanatanterahana ny tanjon'izy ireo dia mamorona toerana manerantany azo antoka izy ireo ary tsy misy hetsika tsy ara-dalàna tsy dia misy dikany.
Manambatra loharanon-karena: Ny INTERPOL dia mamorona fotoana fanangonana sy fizarana loharano. Ireo loharanom-pahalalana ireo dia mahasoa ny firenena tsy ampy azy ireo, indrindra ny ara-bola. Ny firenena tsirairay ao amin'ny mpikambana dia samy manome isa arak'izay voalazan'ny General Assembly. Azon'ny besinimaro atao koa ny manome an-tsitrapo ny fikambanana.
Ny haino aman-jery sosialy dia nanaporofo fa fitaovana lehibe amin'ny INTERPOL na masoivohon'ny mpampihatra lalàna amin'ny anjara asany. Miaraka amin'ny fanampian'ny haino aman-jery sosialy, INTERPOL dia afaka manao izao manaraka izao:
Mifandraisa amin'ny vahoaka: INTERPOL dia ao amin'ny tamba-jotra sosialy toy ny Instagram, Twitter, sy ny sisa. Ny tanjon'izany dia ny mifandray amin'ny be sy ny maro, mamaky fampahalalana ary mahazo valiny.
Ankoatr'izay, ireo sehatra ireo dia ahafahan'ny besinimaro mitatitra izay olona na vondron'olona ahiahiana ho voarohirohy amin'ny asa tsy ara-dalàna.
Fiantsoana: Ny media sosialy dia fitaovana lehibe tamin'ny fikarohana ireo olon-dratsy karohina. Miaraka amin'ny fanampian'ny subpoena, ny INTERPOL dia afaka manala sarona ireo olon-dratsy miafina ao ambadiky ireo lahatsoratra sy kaonty media sosialy tsy fantatra anarana.
Ny subpoena dia fanomezan-dàlana avy amin'ny tribonaly mba hahazoana vaovao, indrindra ireo manokana, ho an'ny tanjona ara-dalàna.
Hanaraka ny toerana: Ny media sosialy no nahafahan'ny INTERPOL nanara-maso ny toerana misy ireo ahiahiana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana sary, azo atao ny mamantatra ny toerana misy an'ireo ahiahiana amin'ny INTERPOL. Tena ilaina izany amin'ny fanarahana ireo sindika mpanao heloka bevava marobe noho ny fanondroana toerana.
Ny haino aman-jery sosialy sasany toy ny Instagram dia mampiasa ny marika amin'ny toerana misy azy ireo ho mora ho an'ny mpampihatra lalàna mahazo fidirana amin'ny porofo an-tsary.
Fihetsiketsehana: Ity dia kaody kaody ho an'ny asa iray izay anaovan'ny mpampihatra lalàna hisamborana mpanao heloka bevava. Ity teknika ity ihany dia nampiasaina tamin'ny media sosialy ary nahomby.
Ireo masoivohon'ny mpampihatra lalàna dia afaka mampiasa kaonty media sosialy sandoka hamoahana ireo mpanao heloka bevava toy ny mpivarotra zava-mahadomelina sy ny mpandeha an-tongotra.
Ny INTERPOL dia manao izany ho an'ireo olon-dratsy mitady fialofana any amin'ny firenena izay tsy azy ireo. Ny INTERPOL dia misambotra olona toy izany ary mitady fomba hamerenana azy ireo any amin'ny firenena niaviany hiatrika ny lalàna.
Fanamarihana izay ampiasain'ny INTERPOL amin'ny fifandraisana
Iray amin'ireo andraikitra lehibe ananan'ny INTERPOL ny fizarana angona amin'ny herin'ny polisy any amin'ireo firenena mpikambana. Zava-dehibe izany ny fanarahan-dia ireo mpanao heloka bevava na aiza na aiza firenena iainan'izy ireo. Iray amin'ireo fomba fizaràn'ny INTERPOL angona ho an'ny fanarahan-dia ireo mpanao heloka bevava dia ny fandefasana fampandrenesana manana loko.
Ireo hafatra ireo dia mandalo hafatra tsy mitovy.
Mena: Midika izany fa ny ahiahiana manokana dia mpandika lalàna lehibe. Lazainy amin'ny firenena mpikambana izay misy ilay olon-dratsy hijerena ilay mpanao heloka bevava ary hisambotra azy ireo vonjimaika. Aorian'izay dia afaka manafaka azy any amin'ny tanindrazany amin'ny alàlan'ny fomba diplomatika ny firenena mpikambana.
Maitso: Ny fanamarihana maitso dia mitovy amin'ny mena. Manaraka ny fomba mitovy amin'ny Mena ihany izy. Ny maha samy hafa an'io fampandrenesana io sy ny mena dia ny tsy fahatokisan-tena noho ny heloka vitan'ny olona ahiahiana. Araka izany, ny fanamarihana maintso dia tsy raisina maika toy ny mena.
Blue: Mampita hafatra ilay filazana manga fa mpanao heloka bevava malaza ratsy. Ampiasaina io rehefa tsy fantatra ny misy ilay ahiahiana. INTERPOL dia mandefa ity hafatra ity any amin'ireo firenena mpikambana ao aminy mba hahafantaran'izy ireo rehetra an'izay ahiahiana. Raha vantany vao hitan'ny firenena mpikambana ao amin'ny sisin-tanin'izy ireo ny olona ahiahiana dia ampandrenesiny ny tanindrazany.
Voasary: Ny Orange dia fampitandremana ho an'ny firenena mpikambana iray momba ny hetsika na olona iray izay mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka. Ohatra, ny INTERPOL dia afaka mampitandrina ireo firenena mpikambana momba olona iray mety ho mpampihorohoro. Na mety misy ifandraisany amin'ny fampihorohoroana ny hetsika iray.
Mavo: Ity loko ity dia hafatra ho an'ireo firenena mpikambana mba hanampy amin'ny fitadiavana olona tsy hita izay matetika tsy ampy taona. Mety hampiasaina koa izy io mba hahalalan'ny olona ny olona tsy afaka mampahafantatra ny tenany.
Black: Midika izany fa ny olona maty tsy olom-pirenena dia any amin'ny firenena iray. Azo ampiasaina koa izy io hampahafantarana ny hafa izay mety mitady ilay olona.
Manakarama mpisolovava iraisam-pirenena INTERPOL any UAE
Ilaina ny fanananao fitaovana hiarovan-tena rehefa voatonona tsy ara-drariny ho mpanao heloka bevava ianao. Raha tsy misy fahalalana ny fiasan'ny rafitra INTERPOL dia ho sarotra ny miaro tena. Ny fahasarotan'ny rafitra koa dia manasarotra ny fisahanan'ny mpisolovava mpiaro heloka bevava ara-dalàna.
Izay no antony maha-zava-dehibe ny fananganana mpisolovava iraisam-pirenena mpiaro ny heloka bevava.
Amal Khamis Advocates Legal consultant dia orinasan-dalàna monina any UAE za-draharaha amin'ny fifandraisany amin'ny raharaha ara-dalàna INTERPOL. Manam-pahaizana manokana momba ny fampandrenesana Interpol sy ny fampandrenesana avy amin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny UAE izay navoakan'ny polisy Interpol sy Dubai. Ny ekipan'ny mpisolovava mpiaro heloka bevava dia manolo-tena amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifanay. Afaka matoky ianao fa amin'ny Mifandray aminay, hiara-miasa akaiky aminao izahay mba hahazoana antoka fa voavaha ny olana rehetra.